आङ सान सुकीको निवासमा बम आक्रमण
काठमाडाै । म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीको निवासमा बिहीबार बिहान बम विस्फोट गराइएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
सो विस्फोटक पदार्थ पेट्रोल बम रहेको बताइएको छ । उहाँको निवास परिसरमा बाहिरैबाट बम हानिएको समाचारमा जनाइएको छ । पेट्रोल बम हानिएको तर त्यसबाट कुनै क्षति भने नभएको समाचारमा जनाइएको छ । प्राप्त समाचारमा जनाइएअनुसार सो बम विस्फोटबाट लागेको आगो सुरक्षाकर्मीले तत्कालै निभाएका थिए । राज्य परिषदका महानिर्देशक उ जवा हतीले भन्नुभयो– उहाँको निवासमा बम हानिएको थियो, त्यो पेट्रोल बम थियो । तर समयमै आगो निभाएकोले क्षति हुन पाएन ।
आक्रमणकारीहरुको खोजी जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– बिहीबार बिहान सबेरै भएको सो आक्रमणका दोषीहरुको खोजीकार्य सुरु भएको छ र त्यसका लागि स्थानीय प्रहरी परिचालन गरिएको छ । विदेशमन्त्री सुकी हाल नेपितवमा रहेको बेला यता यो बम आक्रमण भएको हो । बम कसले र किन विस्फोट गराएको हो भन्ने बारेमा केही आएको छैन । साथै बम के कति मात्रामा शक्तिशाली हो र त्यसमा कति जनाको संलग्नता हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि म्यानमारको सुरक्षा प्रमुखका तर्फबाट केही बताइएको छैन ।
पछिल्लो समयमा यहाँका रोहिङ्ग्या समुदायका नागरिकमाथि म्यानमारको सैनिक ज्यादति बढेको भनी भागेर बङ्गलादेशमा शरणार्थीका रुपमा पुगेपछि म्यानमारको सरकार र विशेषगरी सुकीमाथि ठूलो दबाब परेको छ । विश्वकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री तथा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेताजस्तो व्यक्तिले देशको शासनको बागडोर सम्हालेको बेला देशभित्रैका नागरिक यसरी लखेटिएर शरणार्थीको रुपमा विदेशिनुपरेको भन्दै उहाँको नै बढी आलोचना भएको थियो ।
प्रकाशित : बिहिबार, माघ १८, २०७४१४:०१
७ दिनदेखि हराएका जोन घनाजंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटिएका थिए – उद्धारकर्ता आलेको बयान
प्रभावकारी बन्दै सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता, मातृृशिशु मृत्युदर घट्यो !
वृद्धभत्ता लुट्न आफ्नै हजुरआमालाई रडले हिर्काएर गम्भीर घाइते बनाउने नाति यी हुन् !
मौसम परिवर्तनसँगै आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे, सावधान रहन आग्रह !